Kulan looga hadlayay horumarinta Booliska oo ka dhacay Muqdisho
kulan ay isugu yimaadeen saraakiisha ciidamada Booliiska Soomaaliyeed iyo kuwa AMISOM ayaa maanta ka dhacay xarunta ciidamada AMISOM ee ku taal xeradii Xalane ee magaalada Muqdisho.
Ujeeddada kulanka ayaa waxa uu ahaa sidii booliska Soomaaliyeed looga horumarin lahaa ka hortagga xadgudubyada lagula kaco haweenka iyo caruurta.
Taliyaha ciidamada booliiska Soomaaliyeed S/Gaas Shariif Sheekhuna Maye oo halkaasi ka hadlay ayaa codsaday in la caaawiyo Booliiska Soomaaliyeed si ay awood ugu yeeshaan ka hortagga fal dambiyeedyada liddiga ku ah xuquuqda aadanaha.
Taliye ku xigeenka ciidamada Booliiska AMISOM General Benson Oyo oo isnaa halkaa hadal ka jeediyay ayaa wuxuu sheegay in maalinta isniinta ah ee bishan june tahay 11 sraakiil ka socota booliska Soomaaliyeed iyo wefdi ka socda wasaaradda horumarinta haweenka tababar loogu qaadi doono dalka Kenya kaasi oo uu sheegay inay maal gelinayso dowladda Denmark.
Taliye ku xigeenka ciiidamada Booliiska AMISOM ayaa sidoo kale sheegay in tababarkaasi lagu bari doono saraakiisha ciidamada booliiska Soomaaliyeed habka looga hortago xadgudubyada loo geysto haweenka iyo caruurta.
Wuxuu sheegay in lagu dhawaaqi doono maxkamad qaadda dacwadaha la xiriira tacadiyada loo geesto dadka nugul oo ay qeeybta ka yihiin caruurta iyo haweenka.
Ugu dambeyn ayuu sheegay general Benson Oyo Nyeko in booliiskooda ay banaanka uga soo bixi doonaan xeryahooda islamarkaana ay caawin doonaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed isaga oo tilmaamay in ciidamo badan oo ka tirsan Booliiska AMISOM iyo weliba kuwa Soomaali ah oo tabar ku qaadanayo dalka Ugandha ay kusoo wajahan yihiin dalka Soomaaliya.